Dowladda Itoobiya oo isbadel ku sameeysay siyaasadeeda ku aadan dalka Soomaaliya – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Dowladda Itoobiya oo isbadel ku sameeysay siyaasadeeda ku aadan dalka Soomaaliya
Dowladda Itoobiya ayaa haatan lasoo baxday isbadel aan caadi ahayn oo ku aadan siyaasadda Soomaaliya, kadib markii safiirka cusub iyo ergeyga gaarka ah oo u qaabilsan Soomaaliya ay usoo magacawday Jamaaludiin Mustafa Cumar.
Jamaaludiin Mustafa Cumar ayaa la sheegayaa inuu badli doonno Wondimu Asamne oo hore safiir uga ahaa dalka Soomaaliya, balse haatan waqtigiisu dhamaaday.
Warqad kasoo baxday xafiiska madaxweynaha dalka Itoobiya Mulatu Teshome ayaa xilka safiirnimo ee Soomaaliya loogu magacaabay Mr Jamaaludiin Mustafa Cumar.
Jamaaludiin oo hore u ahaa ku-xigeenka safiirka Itoobiya ee Soomaaliya ayaa ah shaqsi kasoo jeeda deegaanka Soomaalida Itoobiya, waana safiirkii labaad ee asalkiisu Soomaali yahay oo ay Itoobiya usoo magacaawdo dalka Soomaaliya.
Sidoo kale, Jamaaludiin Mustafa Cumar ayaa loo magacaabay wakiilka gaarka ah ee dowladda Itoobiya u qaabilsan Soomaaliya.
Tan iyo markii uu xilka madaxweynaha Soomaaliya ku guuleystay Mudane Maxamed C/laahi Farmaajo, ayaa waxay dowladda Itoobiya bilawday inay dib u eegis ku sameeyso siyaasadeeda ku aadan dalka Soomaaliya, waxaana haatan muuqata in tallaabadii ugu horeeysay ay ku dhaqaaqday.